ရွိင်ကိန်းပြောသော မန်ယူရဲ့ရာသီအဖွင့်ခရီး နှင့် MEN Sport News အင်တာဗျူး – FBV SPORT NEWS
ရွိင်ကိန်းပြောသော မန်ယူရဲ့ရာသီအဖွင့်ခရီး နှင့် MEN Sport News အင်တာဗျူး
September 29, 2020 By admin Sports News
ရွီင်းကိန်းဆိုတာ မန်ယူရဲ့ ရွှေရောင်နေ့ရက်အစပိုင်းတွေရဲ့ အခန်းမှာ မပါမဖြစ်ကစားသမားတဦးဖြစ်ခဲ့သူပါ..ရွိင်ကိန်းကတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စ်ရဲ့ရာသီအစနဲ့ပတ်သက်လို့ MEN Sport News မှာ ယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်…
မေး- မန်ချက်စတာယူနိုက်တစ်ရဲ့ရာသီအဖွင့်ရလဒ် နဲ့ ဒီနှစ်ရာသီခရီးတလျောက်လုံးကို ဘာများပြောချင်ပါသလဲ….
ဖြေ – ရွိင်ကိန်းက ” ကျနော် ဒီရာသီ အဖွင့်ပွဲ ပဲလေ့စ် ကိုရှုံးတာကနေစပြောပါမယ်…ကျနော်တို့ခေတ်မှာ ရာသီအဖွင့်တွေမှာ အရှုံးနဲ့ မရင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ ပဲလေ့စ်ပွဲက တော့ ကြံခိုင်ရေးမပြည့်၀တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ အတွေ့ကြုံနုသေးတဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ စဖွင့်လိုက်ရတော့ အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်တာ အပြစ်ပြောလို့မရပါဘူး လူငယ်တွေဘဲ အမှားနဲ့မကင်းဘူးပေ့ါဗျာ…ဒီလို အမှားကို သူတို့ပြင်ပြီး ဘရိုက်တန်နဲ့ပွဲမှာ အနိုင်ရယူခဲ့တယ်လေ …သူတို့ကိုအခွင့်ရေး ပိုပေးသင့်ပါတယ်….
မေး- မန်ချက်စတာယူနိုက်တစ်ရဲ့နောက်တန်းအားနည်းချက်တွေနဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းကွင်းလယ်နေရာအချို့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို သုံးသပ်ပေးပါအုံး….
ဖြေ- မန်ယူမှာ အားနည်းချက်အရှိဆုံးက နောက်တန်း ဆိုတာမှန်ပါတယ်…ကျနောတော့ ကစားကွက်နဲ့ အံ့ဝင်မှုမရှိသေးတာလို့့မြင်ပါတယ်…ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆိုးရှားလ်က မန်ယူကို ဘာစီလိုနာလိုအကွက်ဖော်ပြီးကစားဖို့ ပုံသွင်းနေတယ်ဆိုတာ မြင်နိုင်ပါတယ်…နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ခေတ်က တောင်ပံတိုက်စစ်တွေအားထားတဲ့ အင်္ဂလန်ပုံသေနည်းကစားကွက်ကို ပြန်ပြောင်းပြီး အသင်းလိုက်စုဖွဲ့မှုပုံစံကိုသွားနေတာလို့မြင်ပါတယ်..
အဲ့ဒီတော့နောက်တန်းမှာအမှားများတယ်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ် တွေစွတ်စွဲချင်းခံနေရတဲ့ ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ မက်ကွိင်းယား ၊လင်ဒီလော့ တို့ကို ကျနော်တို့ အချိန်တခုပေးရမှာပေါ့ဗျာ..တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုလည်း ရတ်ဖို့စ်တို့ ၊ဘရူနို ၊ ဗန်ဒါဘတ် ၊ မာတစ် တို့ဟာ ဘာစီလိုနာက မက်ဆီ ၊ ဇာဗီ ၊ အင်ဒီယေစတာ တို့တွဲလုံးတွေနဲ့ ဥရောပညတွေကို သိမ်းပိုက်သလို သိမ်းပိုက်ဖိုကရောက်လာအုံးမှာပါ……ကျနော်တို့ ဆိုးရှာလ်ကိုအချိန်ပေးကျ၇အောင် ဟုပြောသွားခဲ့ပါတယ်..
မေး- မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စ် နွေရာသီမှာ ကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ပေါ့ဘာနဲ့ လင်ဒီလော့ကို ထွက်ခွာမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ဘာမှားပြောချင်ပါသလဲ..
ဖြေ-ဒါကတော့ နည်းပြအပေါ်အများကြီးမူတည်လို့ ဝင်စွက်ပြီးတော့မပြောချင်ပါဘူး….
မေး- မန်ချက်စတာယူနိုက်တစ်ကို အကြံပြုချင်တာများရှိပါသေးလား…
ဖြေ – အနည်းငယ်တော့ ရှိပါတယ်….ကစားသမားခေါ်ယူမှုကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်စေချင်ပါတယ်ပြီးတော့ ဒီအခုကစားကွက်ပုံဖော်တာကို အသင်းသားအားလုံးအားစိုက်ထုတ်မှုရှိရပါမယ်…နည်းပြဆိုးရှားလ်အနေနဲ့လည်း ယခုကစားကွက် ဟာ ကစားသမားတွေနဲ့ အံဝင်မှုမရှိဘူးဆို ၄-၃-၃ ကစားကွက်ကို ပြောင်းလည်းကစားပြီး တောင်ပံတိုက်စစ်အသားပေးကစားမှုကို ပြန်လည် ပုံဖော်သင့်ပါတယ်….ရာသီဝက်ထိအချိန်ဆွဲတာမျိုးတော့ မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ဗျာ….ဟု ရီမောကာပြောသွားခဲ့ပါတယ်…
MEN Sport News
ပရိတ်သတ်တွေဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့ မန်ယူ ကစားသမားနေရာလုပွဲ….
ကစားသမား၃ဦးကို အမြန်မဝယ်ပါက မန်ယူEPLခရီးခက်ခဲလိမ့်ဟု နဗီးလ်ပြော